तपाइँको साइटमा मिडियालाई सजिलैसँग विम्पी प्लेयरसँग थप्नुहोस् Martech Zone
आइतबार, अगस्त 5, 2007 आइतबार, अगस्त 5, 2007 Douglas Karr
केही वर्ष पहिले, म एक राम्रो फ्ल्यास एमपी3प्लेयर खोज्दै थिए ताकि मेरो छोराले उनलाई थप्न सकून् सजिलैसँग आफ्नो ब्लगमा संगीत। फ्ल्यास प्लेयरहरू लागू गर्न राम्रो छन् किनकि उनीहरू संगीत स्ट्रिम गर्न सक्दछन् बरू प्रयोगकर्तालाई एकैचोटि सबै डाउनलोड गर्नुहोस्। मैले खोजी र खोजी गरेपछि, म अन्ततः त्यहाँ पलायो विम्पि प्लेयर.
यस सप्ताहअन्तमा, एक अनलाइन अन्तर्वार्ता मैले एनपीआरको लागि अनलाइन स्रोतहरू प्रयोगमा गरेको लागि तपाइँको क्षतिपूर्ति सुधार ऑनलाइन अनलाइन पोष्ट गरिएको थियो। स्थान एकदम राम्रो थियो कि म यसलाई वेब टूलमा पोस्ट गर्न चाहान्छु जुन मैले बनाएको छु, वेतन कैलकुलेटर.
भिम्पीसँग धेरै प्लेयरहरू छन्, एक साधारण बटन, अडियो प्लेयर, र एक भिडियो प्लेयर। सायद तिनैको सब भन्दा राम्रो विशेषता भनेको ती किफायती र पूर्ण अनुकूलन योग्य हुन्। I मेरो छोराको साइट मा प्लेयर डिजाइन करीव 30० मिनेटमा।
मैले एउटा डिजाइन गरे जोन्स सोडा को लागी खेलाडी गत वर्ष उनीहरूको वेबसाइटमा फिचर गरिएको थियो। हिजो, मैले यसका लागि सरल बटन प्लेयर डिजाइन गरेको छु वेतन कैलकुलेटर लगभग दस मिनेट मा।
अडियो वेबसाइटहरु को लागी एक शानदार उपकरण हो। म विश्वास गर्दिन कि यो अधिक प्रयोग वा स्वचालित रूपमा सुरु हुनुपर्दछ (म अडियो अनलाइन द्वारा आश्चर्यचकित भएको घृणा गर्छु!), तर यसले वेबसाइटमा वास्तवमै धेरै थप्न सक्छ - फोटो वा भिडियोले व्यक्तित्व प्रदान गर्दा नै। जानकारी वा वेब उपकरणको लागि, अडियो क्लिपले साइटलाई केहि अधिकार प्रदान गर्न सक्दछ।